मर्स्याङ्दीको धार चामेतिर- समाचार - कान्तिपुर समाचार
श्रावण ८, २०७८ यमुना पराजुली अधिकारी
दोस्रो चरणको लकडाउनमा भने हाम्रो ग्रुप खुबै जम्यो । बाल्यकालका रमाइला किस्सा सुन्दा र सुनाउँदा भने कहिले लाज लाग्यो त कुनै बेला गर्व पनि महसुस भयो । केही कुरामा तारिफ पाइयो/गरियो भने केही कुरामा आफू रातो भइयो र अरूलाई पनि रातो पारियो । रुसी लेखक अलेक्ज्यान्डर रास्किनले भनेझैं, हामीले बालबालिकाका लागि लेख्ने कथा त साँच्चै हाम्रै बाल्यकालका कथा पो रहेछन् । साथीहरूसँग छलफल भइरहँदा मलाई महसुस भयो, मैले अगाडि लेखेका कतिपय बालकथा त आफ्नै कथा पो रहेछन् ।
अझ हामी गाउँघरमा हुर्के–बढेकाहरूका लागि त जताततै कथैकथा । खोलानाला, लेकबेंसी, घाँसदाउरा, मेलापात कतिकति । साथीहरूका छोराछोरी मोबाइल स्क्रिनमा झुलुकझुलुक देखिँदा बाल्यकालका आफ्नै साथी देखेझैं भइरहेको थियो । हरेक क्षण बाल्यकाल फर्केर आइरहेको थियो ।
सुरुसुरुमा गफ मात्र गरेर बिताउने हामी पछिल्लो समयमा भने दिनको एउटा विषयमा छलफल गर्न थाल्यौं । भगवद्गीतादेखि कुरान हुँदै बाइबलसम्म पुग्यौं । दिमाग खियाउने, साइनो पत्ता लगाउने हुँदै गाउँखाने कथाको दिन भने साथीहरूका छोराछोरी पनि केही उत्सुक भएर छेउमै सुनेर बस्थे र केही आफ्ना जिज्ञासा पनि राख्थे, जानेको भन्थे । मोबाइल मात्र चलाएर बस्न बाध्य छोराछोरी हामीसँग कुरा गर्न आएको र यसरी घुलमिल भएकामा हामी खुसी भइरहेका थियौं । नानीबाबुहरू यसरी उत्सुक हुन थालेपछि हामीले एक दिन बिराएर उनीहरूलाई केही विषयमा छलफल गर्न दिने सल्लाह गर्‍यौं । विषय उनीहरूले नै छान्ने भए ।
नभन्दै उनीहरू एउटा–एउटा विषयमा कुरा गर्न थाले । हामी श्रोता भयौं । उनीहरूका कुरा सुनिरहँदा लाग्यो, हामीभन्दा निकै अगाडि रहेछन् । सोचाइको दायरा कति फराकिलो ! उनीहरूको उमेरमा हाम्रो क्षमता कहाँ यस्तो हुनु !
उनीहरूको बहसले मलाई बाल्यकालको एउटा किस्सा सम्झाइदियो । स्कुलमा छँदा एउटा वादविवाद प्रतियोगितामा मैले भाग लिएकी थिएँ । विषय थियो— ‘धन ठूलो कि विद्या ?’ मञ्चमा पुगेपछि मलाई त काम छुट्यो, के–के बोलें आफैंले थाहा पाइनँ । तर अहिलेका बालबालिका हर कुरामा कति अगाडि ! कस्तो स्पष्ट !
अर्को एक दिन हाम्रा छोराछोरीको विषय थियो– ‘झुट’ । सबैजसोको भनाइ थियो, ‘झुटो बोल्न त हुँदै हुँदैन । हामीले कसैसँग झुटो बोले पनि आफूले आफ्नो आत्मालाई, आफूलाई कहिल्यै ढाँट्न सकिँदैन ।’ तर एउटी नानीको कुराले ध्यान बढी खिच्यो । उनी भन्दै थिइन्, ‘हामीले सधैं सत्य मात्र पनि बोल्नु हुँदैन । यदि सत्यले कसैको हानि–नोक्सानी गर्छ र चित्त दुख्छ भने त्यहाँ झुटो बोलेकै ठीक ।’ मैले सोधें, ‘भन त कस्तो अवस्थामा झुटो बोल्ने, कस्तो अवस्थामा नबोल्ने ?’
‘आन्टी, म एउटा कथा सुनाउँछु है त ?’ भन्दै उनी सुरु भइन्, ‘राम भन्ने एउटा केटा थियो । उ सधैं झुटो बोल्थ्यो । एक दिन उसका बुबाले उसलाई बेस्सरी गाली गर्नुभयो र अबदेखि झुटो नबोल्न प्रण गराउनुभयो । उसले त्यस्तै प्रण गर्‍यो । ऊ सधैं सत्य बोल्न थाल्यो । परिवारका सदस्य सबै खुसी थिए । एक दिन घरमा पाहुना आउनुभयो । उहाँले रामलाई धेरै खानेकुरा ल्याइदिनुभएको थियो । उहाँले सोध्नुभयो— तिमीलाई यो खानेकुरा मन पर्छ ? उसले भन्यो— धेरै मीठो लाग्छ । उहाँले सोध्नुभयो— अनि तिमी मलाई मन पराउँछौ ? रामले भन्यो— अहँ, मन पराउँदिनँ; तपाईंको ओठ ठूलो छ; आँखा डरलाग्दा छन्; बोली पनि मीठो छैन । यो सुनेर ती पाहुना रातोपिरो हुनुभयो । रामले फेरि बेलुका बुबाको गाली खानुपर्‍यो । त्यसले अरूलाई असर पर्छ भने हामीले त्यहाँ सत्य बोल्नु हुँदैन, बरु मौन बसिदिनुपर्छ, हामी यदि झुट बोल्न चाहँदैनौं भने ।’
सबैलाई उनको कुरा चित्त बुझ्यो । अरू नानीबाबुले पनि भने– अबदेखि हामी यो कुरा ख्याल राख्छौं ।
प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ ०७:५६